Wasiirka Cusub Ee Boostada iyo Isgaarsiinta oo Maanta xilka la wareegay – Radio Muqdisho
Wasiirka Cusub Ee Boostada iyo Isgaarsiinta oo Maanta xilka la wareegay
Xaflad si heersare loosoo agaasimay ayaa maanta ka dhacday xarunta Boostada iyo Boostada Isgaarsiinta taasoo Wasiirka cusub ee wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta Mudane Guuleed Xuseen Qaasim uu xilkii kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaradda mudane Maxamed Ibraahim Aadan. Xafladan oo ay kasoo qaybgalaan madax kasocota xafiiska Raisul Wasaaraha, Xeer illaaliyaha iyo Hanti dhawrka iyo dhamaan shaqaalaha wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta.
Shirkan ayaa lagu furay aayadaha Quraanka Kariimka ah, waxaana hadal kooban ka jeediyay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta Mudane Axmed Xaaji Cabdi isagoo sheegey inay tahay markii ugu horeysey oo Xarunta Boostada iyo Isgaarsiiinta lagu qabtay xaflad xil wareejin ah waxuuna agaasimuhu u mahadceliyay shaqaalaha wasaaradda iyo ciidamada amniga oo suuragaliyay xafladda.
Waxaa ka hadlay xafladda Hanti Dhawrka Guud Dr Nuur Faarax oo sheegay in muhiimadda kala wareejinta xilalka ay tahay in Xafiiskiisu goobjog ka ahaado ay tahay in la hubiyo hantida wasaaradda iyo heshiisyada ay wasaaraduhu galaan oo sharci noqon kara kaliya marka laga diwaangaliyo Xafiiska Hanti Dhawrka Guud. Dr Nuur ayaa ka hadlay muhiimadda Wasaaradda Boostad iyo Isgaarsiintu leedahay iyo sida looga rabo iney dakhli badan soo galiso dawladda.
Kadib waxaa lagu soo dhaweeyey Mudane Axmed Cali Salaad (Taako) wasiir kuxigeenkii hore ee wasaaradda oo ka sheekeeyey waxqabadkii wasaaradda muddadii ay xilka hayeen waxuuna aad ugu mahadceliyay shaqaalaha wasaaradda waxuuna kula dardaarmay inay siday ula shaqeeyeen ula shaqeeyaan wasiirada cusub.
Waxaa la wareegay hadalka wasiirkii hore Maxamed Ibraahim oo ka sheekeeyey maraxladihii lasoo maray iyo meesha hadda ay hawshu mareyso.” Anigu waan ogahay waxaan ubadnaa safaro dibadda ah waxaana ujeedku ahaa inaan soo ceshano waxa dibadda inaga jira oo dhanba, illaahay mahaddii maanta waynu haysanaa waxii inaga maqnaa oo dalkey yaallaan”.
Wasiirkii hore ayaa u hambalyeeyey wasiirka cusub isagoo sheegey inay hortaalo hawlo badan oo muhiim ah.
Waxaa goobta ka hadlay isaguna wasiir ku xigeenka cusub Mudane Jamaal Xasan Ismaaciil una mahadceliyay shaqaalaha wasaaradda iyo masuuliyiinta kasocota Xafiiska Raisul Wasaaraha, Xeer Ilaaliyaha iyo Hanti Dhawrka iyo shaqaalaha wasaaraddaba. Wasiir xigeen Jamaal ayaasoo dhaweeyey wasiirka cusub ee wasaaradda inuu ka dhaho kalmadaha ku aaddan.
Wasiirka cusub ee Wasaaradda Mudane Guuleed Xuseen Qaasim oo ka hadlay madasha ayaa u mahadceliyay dhamaan kasoo qaybgalayaashii shirka iyo guddida loo xilsaaray xilwareejinta waxuuna ka warbixiyay hiigsiga horyaalla wasiirada cusub ee wasaaradda. Wasiirka oo khudbad kooban jeediyay ayaa sheegey in shaqadu tahay mid isku dhiib ah uuna kasii wado meesha uu kaga tagay wasiir Maxamed Ibrahim waxuuna ka codsadey shaqaalaha wasaaraddu iney u diyaargaroobaan shaqo iyo rajo wanaagsan.
Hadalkaas kadib waxaa la galay saxiixii xilwareejinta waxuuna wasiirka cusub ee Mudane Guuleed Xuseen Qaasim iyo Wasiir Kuxigeen Jamaal Xasan Ismaaciil ay kula wareegeen xafiisyadooda kadibna waxey kormeer kusoo sameeyaan dhismaha wasaaradda iyo kulamo la qaatay Agaasimayaasha wasaaradda.
Ogeysiis shaqo ka banaan Premier Bank
Madaxweynaha Jamhuuriyada oo Khudbad ka jeediyay Xuska Ururkii Xornimo Doonka Dalka Ethiopia